China Faka Umngundo yoMvelisi kunye noMthengisi | Mestech
Faka ukubumbayinkqubo yeplastikhi yokubumba ngenaliti apho iplastikhi itofwe kumngxunya kwaye ijikeleze isiqwenga sokufaka okanye iziqwenga ezibekwe kumngxunya ofanayo ngaphambi kokubumba. Iziphumo eziveliswayo zale nkqubo sisiqwenga esinye kunye nokufakwa okanye ukufakwa okufakwe kwiplastikhi.
Faka ukubumba kwandisa amandla eplastiki kwaye kunokunceda ukunciphisa iindleko zeemveliso ngokunciphisa umyinge wexabiso lesinyithi esifunekayo ekwenzeni iimveliso. Isongezo singenziwa ngesinyithi okanye enye iplastiki. Olu hlobo lokubumba lwaphuhliswa ekuqaleni ukubeka ukufakwa kwemisonto kwiindawo ezibunjiweyo kunye nokudibanisa uqhagamshelo lwentambo-iplagi kwiintambo zombane.
Siyayandisa le nkqubo yokubumba ukuze sifezekise izinto abanye ababumba abangakwaziyo okanye abangayi kuzenza.
Kuxhomekeke kubukhulu becandelo, isikhunta esinamacala amaninzi sinokwenziwa ukonyusa imveliso. Imisebenzi yokubumba yesibini yesibini ngamanye amaxesha iyafuneka ukugqibezela indibano.
Faka into yokubumba yindlela yokubumba esetyenziselwa ukufakela intlaka kufakelo olulungisiweyo ngezinto ezahlukeneyo, kwaye izinto ezinyibilikisiweyo zidityaniswe nefakelwe ukwenza imveliso edibeneyo. Iinxalenye ezifakiwe zihlala zingamacandelo esinyithi, kodwa kunye nelaphu, iphepha, ucingo, iplastiki, iglasi, ukhuni, iringi yocingo, iinxalenye zombane.
Inkqubo yeempawu zokufaka ukubumba zezi zilandelayo:
1. Kuyimfuneko ukuqwalasela indibaniselwano kunye nokufakelwa kwendlela elula yokwakheka kwentlaka, ukugoba, ukuqina kwentsimbi, ukomelela kunye nokumelana nobushushu, ukwenzela ukuba yenze imveliso edibeneyo neyintsimbi yeplastikhi.
2. Ngokukodwa, ukudityaniswa kwe-resin insulation kunye nokuqhutywa kwesinyithi kusetyenziswa, kwaye iimveliso ezenziweyo zinokuhlangabezana nemisebenzi esisiseko yeemveliso zombane.
3. Indibaniselwano yangaphambi kokwenza ukufakwa okuninzi yenza ubunjineli beposi yemveliso iyunithi yokudibanisa ifikeleleke ngakumbi.
4. Faka iimveliso aziphelelanga kwisinyithi, kodwa nelaphu, iphepha, ucingo, iplastiki, iglasi, ukhuni, iikhoyili, izinto zombane, njl.
5.Ukuba iimveliso ezingqongqo zokubumba kunye nokugoba kweemveliso zokubumba kwilastikhi yokutywina yerabha, ukusebenza okunzima kokulungiselela amakhonkco okutywina kunokuthintelwa emva kokuba iimveliso ezihlanganisiweyo zenziwe ngenaliti yokubumba kwi-substrate, eyenza indibaniselwano ezenzekelayo iinkqubo ezilandelayo zilula.
6. Ngenxa yokuba indibaniselwano yezixhobo ezinyibilikisiweyo kunye nokufakwa kwesinyithi, umsantsa ophakathi kokufakwa kwesinyithi unokwenziwa uyile kancinci kwaye ukuthembela ekuthembekeni kweemveliso ezidityanisiweyo kuphezulu kunolo lokushicilela ekubumbeni ..
7. Khetha i-resin efanelekileyo kunye neemeko zokubumba, oko kukuthi, kwiimveliso ekulula ukuba zonakaliswe (njengeglasi, iikhoyili, izinto zombane, njl. Njl.), Nazo zinokutywinwa kwaye zilungiswe ngentlaka.
8. Ngokudityaniswa komatshini wokubumba othe nkqo kunye nomphathi, iseti yonke yokufakwa njalo njalo, uninzi lweeprojekthi zokubumba zinokuqonda imveliso ezenzekelayo.
9. emva kokuba kufakelwe ukufakwa, kunokwenziwa kwiimveliso ezinemingxunya engenamngxunya emva konyango lokususa umngxuma ongundoqo.
Iingcebiso kuyilo lwenxalenye kunye nokubumba kokufaka ukubumba
1. Izinto ezifunekayo ekufakeni: ubunzima, ukunyibilika, ukuqina, ukuncipha
2. Nokuba imilo kunye nobungakanani bendawo efakiweyo zilungele ukuthatha, ukubeka kunye nokubeka indawo. Uyilo lwamalungu luya kulungeleka ukufakwa kunye nokulungiswa kwisikhunta ukukhusela iinxalenye ekuphambukeni okanye ekukhululeni phantsi kwefuthe le-resin ehamba.
3. Ukuchaneka kwemveliso kunye nokuhambelana kokufakwa
4. Khetha isakhiwo sokubumba esifanelekileyo, kwaye ukufakwa kunokutywinwa ngokupheleleyo kwi-resin.
5. Ukuncipha kwento efakwe kwisinyithi kulula ukungalingani. Ukuvavanywa komda wobume kunye nokuchaneka kobungakanani bamacandelo abalulekileyo kufuneka kwenziwe kwangaphambili.
6. Ngexesha lenkqubo yenaliti, ukufakwa kwesinyithi kulula ukukhubazeka kunye nokutshintsha, ke ukwakheka kwesikhunta kunye noyilo lobume bokungunda ekulula ukugcina ukufakwa kwesinyithi kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokupheleleyo. Kwiimveliso ezingenakuguqulwa ubume bokufaka, uvavanyo lwangaphambili lubalulekile.
7. Qinisekisa ukuba ngaba ukufakwa kwesinyithi kufuna unyango lokushushubeza okanye ukomisa. Injongo kukuqinisekisa umgangatho wemveliso kunye nokwenza uzinzo.
Isinyithi faka ukubumba Inkqubo yokubumba yentsimbi yeyona nkqubo isetyenziswayo yokubumba.
Isinyithi faka ukubumba luhlobo lwendlela yokulungisa ukufakwa kwesinyithi kwindawo efanelekileyo ekubunjeni kwangaphambili, emva koko kutofa iplastiki ekubumbeni. Emva kokuba kuvulwe isikhunta, ukufakwa kusongelwe kwimveliso ngokupholisa kunye nokuqinisa iplastiki yokufumana imveliso ngokufaka izinto ezinje ngeringi efakwe kunye ne-electrode.
Kuyafuneka ukuba iinxalenye zokufakwa kwesinyithi ezifakwe ngaphakathi kufuneka zibe nobume obufanelekileyo kunye nobukhulu, kwaye iinxalenye zokufakwa okungaguqukiyo kwisikhunta zinokumiswa ngokukhawuleza nangokuthembekileyo ukukhusela iplastiki ekungeneni kwimingxunya yokulungisa. Izinto ezifakiweyo kufuneka zenziwe ngokukodwa, ezinje ngokujija, ukujija, ukujija, njl.njl kumalungu afakelweyo ukuqinisekisa ukulungiswa kwawo ngokuthembekileyo kumbindi weplastiki.
Elungiselelweyo metal faka iindawo yokubumba:
I-Mestech sisicelo esikhethekileyo sokufaka ukubumba .. Nceda unxibelelane nathi ukukunceda ufumane isisombululo esifanelekileyo sokufaka isicelo sakho.
Power plug ukufaka ziphene yokubumba
Nut yobhedu Faka sukube
Precision intsimbi ipleyiti faka sukube
Metal nut faka yokubumba
Egqithileyo Ukuhonjiswa kwe-In-Mold-IML
Okulandelayo: Umzobo wentsimbi
3d eziprintiweyo Ikubumbe Ifaka
Inaliti Ukubumba Yangaphakathi Yangaphakathi
Faka Inaliti Ukubumbela
Ukufakwa kweMold okungaguquguqukiyo
Umngundo weplastiki kumatshini wokususa iinwele